Fitaovana fanamboarana pipette pipette: toetra, fitsipika, masontsivana -BALLYA
Posted on Oktobra 13, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy Uncategorized
Fitaovana fanamboarana pipette dia fitaovana fananganana tendrony pipette mandeha ho azy noforonin'ny orinasanay ho an'ny mpanjifa indostrialy eo amin'ny sehatry ny siansa fiainana sy ny mpanamboatra tendron'ny pipette. Izy io dia karazana fitaovana tsy namboarina manokana. Ireo fitaovana dia an'ny famokarana biomedika manan-tsaina.
Ho setrin'ny olana maromaro toy ny fahasarotan'ny filtration manual nentim-paharazana, ny fahasahiranan'ny fanaraha-maso ny habeny, ny fahasarotan'olombelona, ​​sns., Azonao atao izao ny mampiasa ny masininay mba hanomezana sakafo ny takelaka mihetsiketsika, ny milina mandeha ho azy, manala azy ho azy , ary wick mandeha ho azy, andiana hetsika sarotra toa ny fitrandrahana rivotra mandeha ho azy, ny fahitana azy ho azy, ny fandavana ho azy ny vokatra tsy mandeha, ny famonosana ho azy, sns. Mampiasa ny masontsivana fanaraha-maso microcomputer, interface opéra d'exploitation, tsotra sy mora azo, atambatra amin'ny gazy sy herinaratra, mora ampiasaina.
Mamolavola solosaina haingam-pandeha haingam-pandeha ho an'ny indostrian'ny fitsaboana, fandidiana tsotra, fahombiazana avo lenta, kalitao vitsy, tsy fahombiazan'ny fahaiza-manao matanjaka, fanafoanana tsotra, afaka mahatsapa fanangonana mandeha ho azy toro-hevitra sy singa sivana isan-karazany; ny fitoniana tsara no fizotran'ny fotodrafitrasa tsara indrindra Fitaovana manokana; afaka manatsara ny fahombiazanao amin'ny famokarana, manatsara ny kalitao ary mampihena ny vidin'ny asa.
Ny fitaovana dia afaka mahatsapa asa isan-karazany. Ny fandidiana tsy mitantana dia afaka manolo olona 3-5. Olona iray ihany no takiana hametraka ny kojakoja mifanaraka aminy amin'ny toerana mety. Amin'ny fampiasana teknolojia mekatronics dia azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa izany. Izy io dia mety hitondra tombony lehibe amin'ny orinasa.
1. Mety amin'ny fitaovana famokarana fanodinana faharoa amin'ny toro-hevitra amin'ny laboratoara
2. Avo ny refy miasa, ary ny mahomby dia mety hahatratra boaty 2 isa-minitra.
3. Rafitra fiasan'ny efijery sy maso mpanara-maso programable PLC
4. Ny faritra rehetra dia mandray fitsaboana ambony, mahafinaritra sy malala-tanana;
5. Ireo singa pneumatika hafarana avy any ivelany dia mampiasa FESTO Alemana Andrefana sy SMC Japoney izay maharitra.
6. firafitry ny takelaka kapila fanoratana, multi-station, fahombiazana avo lenta ary fitoniana.
7. Ny milina dia manana diplaoma avo lenta, famahanana mandeha ho azy, fametrahana automatique ireo singa sivana, fitiliana mandeha ho azy, ary fanesorana mandeha ho azy ireo vokatra tsy mandeha;
8. Ny fitaovana dia azo atao-manasokajy-maso-fanaraha-maso-ady totohondry-plugging-refilling-fonosana
9. Mety amin'ny fanangonana sy ady totohondry ny singa sivana amin'ny 10ul, 100ul, 200ul, 300ul, 1000ul toro-hevitra pipette manerantany.
10. Ny fitaovana dia misy fiasan'ny fanairana tsy ara-dalàna sy ny torolàlana haingana momba ny fampahalalana, ny fikarohana ny fitaovana ary ny tsy fisian'ny asa haingana, ny famokarana isa ary ny fanisana isa.
11. Fitaovana fiarovana sy fiarovana fiarovana ary rafitra fanakanana vonjy maika, mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana ny indostria iraisam-pirenena.
Votoatiny manontolo Tokony ho 2t
habe 3.5m * 1.1m * 2m
1. Ny fitaovana dia miaraka amina sosona miasa, sosona fanampiny ary fitehirizana hatrany ambony ka hatrany ambany;
2. Ny sosona miasa dia misy takelaka ambany sy takelaka hovitrovitra;
3. Misy fitaovana fampidinana eo amin'ny lovia farany ambany;
4. Ny takelaka mihetsiketsika dia mifandray amin'ny fitaovana famandrihana amin'ny alàlan'ny fitaovana famahanana mivantana;
5. Fampidinana entana, ao anatin'izany ny singa enta-mavesatra, singa mpamatsiaka axis X ary singa famahanana axis Y izay miara-miasa;
6. Ny singa fampidinana dia raikitra amin'ny singa mpamatsy axis X amin'ny milina amin'ny alàlan'ny takelaka mihetsika, mba hahatsapany fivoriambe haingana.
★ Efy: Ity fitaovana ity dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny boxe an'ny mpanamboatra tendrony, mampihena ny asan'ny mpiasa mpamokatra miverimberina, mampihena ny fitantanana ny orinasa sy ny vidin'ny asa, mampitombo ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny orinasa, manafaingana ny fizotran'ny indostrian'ny indostria ary mampiroborobo ny fampandrosoana ny indostria iray manontolo!
★ manan-tsaina： Amin'ny fifehezana manan-tsaina, fanarahana mandeha ho azy ny photoelectric, famahanana mandeha ho azy, fandaminana marina, fanaraha-maso isometrika, fihinanana mandeha ho azy tsy misy fitaovana, fifehezana hafainganam-pandeha tsy misy dingana ary fiasa hafa, afaka manatsara be ny fahombiazan'ny fandaminana sy ny ady totohondry, hampihena ny lesoka ataon'ny olombelona ary hisorohana ny fahalotoan'ny fifandonana . Ny hafainganam-pandehan'ny ady totohondry sy ny milina basy dia afaka mahatratra 50-100 segondra / boaty.
★ Material: Ny masinina dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony sy alim-pito alimina avo lenta, welding tsy misy fangarony ary firakotra ambonin'ilay tany.
★ fitandremam-pahasalamana: Azo ampitaina amin'ny jiro fanamorana izy, ary ny masinina manontolo dia mety amin'ny fanamorana ny alikaola sy alikaola. Ny fitaovana voahodina dia azo ampiasaina ao amin'ny efitrano madio, tsy misy loharanom-pahalotoana kely kokoa sy androm-piainan'ny milina lava, izay afaka mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny tontolo iainana eo amin'ny sehatry ny biolojika.
★ Fanamboarana tsy fenitra: Izy io dia azo namboarina sy namboarina manokana araky ny tsipelina tendron'ny pipette an'ny mpanjifa sy ny haben'ny elanelan'ny sivana.
★ Karazana tendrony pipette: Ampifanaraho amin'ny tendrony 10/100/200/500 / 1000ul.
★ Tsy maintsy atao ny mameno ny bokotra fanipazana bokotra sy sivana: bokotra tendron-tsarimihetsika basy & famenoana singa famenoana, famenoana fotoana tena izy mba hamoronana masinina mifangaro; misaraka famenoana hamorona a tsipika fivoriambe misaraka.
BALLYA dia mpanamboatra fitaovana automatique tsy manara-penitra mampiditra R&D, famolavolana, famokarana ary ny varotra. Nifantoka tamin'ny automatisation tsy standard io nandritra ny taona maro. Izy io dia manana ekipa injenieran'ny famolavolana automatique tsy manara-penitra, injeniera mivory efa za-draharaha ary rafitra serivisy aorian'ny fivarotana tanteraka. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fikarohana mandeha ho azy, fitaovana tsara amin'ny fony, serivisy tsara amin'ny fony, manome ny mpanjifa matihanina vahaolana amin'ny rafitra rafitra automatique tsy manara-penitra!